Shirkadaha Hamuun U Qabo Ka Qaybgalka Waa Inay Sameeyaan Saddexdan Shayood | Martech Zone
Iyadoo dunidu ay ku jirtay xidhidh sanadka 2020, waayo aragnimada dhijitaalka ah ee ay hodanka ku yihiin sawiro iyo muuqaalo ayaa naga dhigay kuwo isku xidhan. Waxaan si ka badan sidii hore ugu tiirsannay habab dhaqameed oo badan oo isgaarsiinta dhijitaalka ah waxaanan qaadannay habab cusub oo cusub oo aan ku wadaagno nolosheenna oo aan kaga xirno masaafo ammaan ah. Laga soo bilaabo Zoom ilaa TikTok iyo Snapchat, waxaan ku tiirsanay qaababka dhijitaalka ah ee isku xirka dugsiga, shaqada, madadaalada, dukaameysiga, iyo la xiriirka kaliya ee aan jecelnahay. Dhammaadkii, awoodda nuxurka muuqaalku waxay lahayd macne cusub.
Si kasta oo ay dunidu u horumarto masiibada ka dib, macaamiishu waxay sii wadi doonaan inay u hanqal taagaan nuxurka muuqaalka dhinac kasta oo nolosha ah.
Qalalaasaha COVID-19 waxa uu dadajiyay digitization is dhexgalka macaamiisha dhowr sano.
Si aad ula kulanto xaqiiqooyinkan cusub ee u horseedaya natiijooyinka ganacsiga, calaamaduhu waa inay diiradda saaraan saddex qaybood oo ka mid ah waxyaabaha muuqaalka ah si ay u dhisaan xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan dhagaystayaashooda.
Iftiin ku shido Microbrowsers iyo Shaashada Yaryar
Ma ogtahay in barnaamijyada fariimaha la isku diro ay dhaafeen baraha bulshada tirada isticmaalayaasha firfircoon ee bishiiba 20%? Isticmaalayaal badan oo ku jira abka fariimaha gaarka ah, calaamaduhu hadda waxay haystaan ​​fursad ay ku gaadhaan macaamiisha iyaga oo adeegsanaya microbrowsers, ama horudhacyada mobilada yar yar ee ay u adeegto URL-ka lagu wadaago barnaamijyadaas fariimaha ah.
Si loo gaadho macaamiisha wakhtiyadaas mobilada, waxa muhiim u ah summadaha si ay u gartaan microbrowsers-ka caanka ka ah saldhiga macaamiisha iyo warshadaha la siiyay. Gudaha Warbixinta Warbaahineed Muuqaaleedka 2021 ee Cloudinary, Waxaan ogaanay in farriimaha sare ee farriimaha caanka ah ay jecel yihiin iMessage - waxay haysaa booska koowaad ee caalamiga ah iyo qaybaha.
WhatsApp, Facebook Messenger, iyo Slack ayaa ka mid ah aaladaha kale ee caanka ah ee lagu tilmaamo mugdi bulsho kanaalka, kaas oo qeexaya saamiyada saamiyada ee muuqda ee aan la arki karin. Fursadaha ka-qaybgalka-shaashadda-yar-yar waxay saameyn weyn ku yeelan karaan tirada gujisyada iyo ka-qaybgalka dheeraadka ah, wax calaamaduhu maanta ma awoodaan inay seegaan.
Calaamaduhu waxay u diyaarin karaan sawiradooda iyo fiidyowyadooda microbrowsers iyagoo wax ka qabanaya baahiyaha gaarka ah ee kanaalada mugdiga-bulsheed ee gaarka ah. Microbrowser kasta ayaa si kala duwan u daah-furi doona aragtida isku xirka, sidaa darteed summadaha waa inay wanaajiyaan oo u habeeyaan sawiradan iyo fiidiyowyada si waafaqsan si ay u soo jiitaan xiriirinta. Iyadoo muuqaalada la hagaajiyay, summaduhu waxay samayn karaan aragti hore oo wanaagsan marka xidhiidhinta lala wadaago qoyska, asxaabta, iyo asxaabta.
Sheekooyin Xiiso Leh Ku Wadaag Muuqaal, Muuqaal iyo Muuqaalo Kale
Fiidiyowgu si weyn ayuu u koray intii lagu jiray masiibada, taasoo siinaysa albaab laga galo adduun ka baxsan xaqiiqooyinka naga xidhan.
Laga bilaabo Jannaayo 2019 ilaa aafada faafa, codsiyada fiidiyowga ayaa labanlaabmay min 6.8% ilaa 12.79%. Baaxadda fiidiyaha ayaa kor u kacday in ka badan 140% Q2 2020 oo keliya.
Cloudinary 2021 Xaalada Warbaahineed Muuqaal
Iyadoo ay sii socoto kor u kaca fiidyowga, la yaab maaha in summadaha ay maamulayaan oo ay beddelaan waxyaabo badan oo muuqaal ah si ka badan sidii hore si ay u gaaraan macaamiisha. Dhexdhexaadinta sheeko-sheekeysiga ee xoogga badan waxaa loo isticmaali karaa siyaabo dhowr ah, oo ay ku jiraan:
Muuqaalo la iibsan karo - Noocyada ganacsiga e-commerce, fiidiyowyada wax laga iibsan karo waxay keeni karaan alaab nolosha, ka dibna waxay ku xidhi karaan dukaamaysiga bogag wax soo saarka ee ku habboon halkaas oo ay ku iibsan karaan wax-iibsasho-waqti-daqiiqad ah.
Muuqaalo 3D ah - Calaamaduhu waxay soo saari karaan sawirro 360-digrii ah oo animated ah ama fiidiyoow ah qaabka 3D si ay u abuuraan khibrad dukaameysi oo casri ah oo ka jawaabaya bog kasta oo faahfaahinta alaabta ah.
Fiidiyowyada is-dhexgalka isticmaalaha Fiidiyowyada waxaa sidoo kale lagu soo gudbin karaa siyaabo lama filaan ah oo hal abuur leh, sida goobta internetka ee macaamiisha kuwaas oo soo bandhigaya waxyaabo ay ka mid yihiin fikradaha cuntada ama qurxinta qurxinta, caawinta abuurista khibrad calaamad ah oo aan qummanayn.
Si loo mideeyo fiidiyowyadan, kooxaha suuq-geynta iyo kuwa horumariya ee taageera u beddel hantida fiidiyowga 17 jeer celcelis ahaan. Tani waa hab aad u adag oo waqti badan qaadanaysa oo u baahan horumariyayaal si ay u maareeyaan codec-yada fiidyaha ee miisaanka. Si loo badbaadiyo boqollaal saacadood oo waqti horumarineed ah oo dib loogu qoondeeyo wakhtigaas dadaallo badan oo cusub, calaamaduhu waxay ku tiirsanaan karaan AI si ay geeddi-socodka uga dhigaan mid degdeg ah oo aan kala go 'lahayn.
Kobcinta ka jawaabista mobaylka
Ka jawaabista moobilku waa lama huraan, gaar ahaan marka mobilku xisaabinayo qiyaastii kala badh taraafikada shabakadda adduunka oo dhan. Summadaha, tani waxay ka dhigan tahay in la hubiyo in sawirrada iyo fiidyowyadu ay ka jawaabaan oo loo hagaajiyey aaladaha mobilada. Kuwa aan u isticmaalin naqshad jawaab celin ah oo loogu talagalay hantidooda muuqaalku waxay luminayaan fursad ay kor ugu qaadaan darajooyinka SEO. Xarumaha Muhiimka ah ee Google dhamaantood waxay ku saabsan yihiin khibrada isticmaalaha, iyo kala hormarinta ka jawaab celinta mobaylka waxay xaqiijin doontaa in mareegta astaanta si fudud looga helo qiimeynta raadinta.
Mar labaad, tani maaha hawl fudud marka la gaarsiinayo sawirro iyo fiidiyowyo goobo kala duwan maalin kasta. Ku dhufo taas daaqado kala duwan, jihayn, iyo qalabyo kala duwan, waxayna noqon kartaa hawl aad u culus. Si loo hubiyo in wax walba loo qaabeeyey mobilka-koowaad, summadaha waxay codsan karaan nashqad jawaab celin toos ah si ay u bixiyaan khibrad isticmaale oo tayo sare leh, iyada oo aan loo eegin shaashad ama qalab. Automation-ka, summaduhu waxay kicin karaan hufnaan weyn xagga socodka shaqada waxayna si weyn u wanaajin karaan darajada iyo khibradda mobilada.
Ku Dhis Xiriir Wanaagsan Adigoo Awooda Ka Qaybqaadashada Muuqaal-U Horeeya
Faafida, waxaan ka baranay in waqtiyo aan la hubin, calaamaduhu ay u baahan yihiin inay fahmaan sida loola xiriiriyo oo loola macaamilo dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah. Microbrowsers, fiidiyowyada, iyo mareegaha mobilada ayaa sii wadi doona qaabaynta sida macaamiishu u arkaan oo ula falgalaan summadaha ay jecel yihiin. Automation iyo AI ayaa lagama maarmaan noqon doona si loo gaarsiiyo khibradahaan miisaan ahaan.
Iyada oo muuqaaladu ay udub dhexaad u tahay aduunkan cusub ee ka qaybgalka dhijitaalka ah, calaamaduhu waxay hirgelin karaan dhaqamadan ugu wanaagsan istiraatijiyaddooda guud waxayna kor u qaadi karaan khibradaha muuqaalka-koowaad.
Warbixinta Warbahinta Muuqaalka ee 2021
Tags: 2021muuqaalada 3daiqalabayntadaruuro lehgoogle core web vitalsbarnaamijyada fariimahamicrobrowsershawlgelinta mobiladafiidiyaha gacantamareegaha mobiladaNaqshad wax ku ool ahfiidiyowyo la iibsan karodebcinxaaladda warbaahinta muuqaalkaxaaladda warbixinta warbaahinta muuqaalkauser interface videoshantida fiidiyowgacodecs videobeddelaadda fiidiyahaka qaybqaadasho muuqaalwarbaahinta muuqaalkaWhatsApp